EURUSD & USDCHF mune purofiti + Zvimwe Zvichauya - Forex Lens
EURUSD & USDCHF mune purofiti + Zvimwe Zvichauya
Forex Kutengesa Kuongorora, Urarame Bhuku Rekushandisa, Technical Analysis
Sekufungidzirwa kwemitengo yechiito, ese maUSERUSUS uye USDCHF mabhizimusi ekusetesa ari kutamba kunze sezvanga zvichitarisirwa uye mubatsiro. NaDollar uptrend yasara yakasimba, mari zhinji inofanirwa kutarisirwa.
EURUSD yakazviwana pasi -0.37% nhasi sezvo mutengo uchipfuurira pasi payo kuderera. Iyo yekumberi kwekuchangoburwa-kutengesa-yaive mutengo wekuvhara bearish pazasi pevhiki rakaderera. Vatengesi vanogona kutarisira kuti mutengo unoburitsa zvishoma nhasi, vasati vasvika pachinangwa che1.16400.
Sezvo iyo Dollar inosundira kumusoro, USDCHF iri kuramba ichikwira futi. Pakutanga nhasi, iyo DXY yakwanisa kusvika 93.200 uye kuvhara kwekusimudzira pamusoro peiyi nhanho. Izvi zvinofanirwa kutungamira mukuwedzera kuwana kweUSDCHF. Yekutanga tarisiro yemitengo yechiito vatengesi vachange vachinangisa ndeye 0.94700.
Mangwana igwaro rebasa reADP iro rinomiririra huwandu hwemabasa akawedzerwa kusanganisa hurumende nevekurima. Kufanotaura kwazvino kusimudzira kubva kumhedzisiro yapfuura nemabasa anokarirwa makumi mashanu nemakumi mashanu nemakumi mashanu achiwedzerwa mwedzi uno wapfuura Mhedzisiro yakanaka inogona kutumira iyo Dollar kunyangwe yakakwira.
Sign up a Nhengo Dzemahara.
Kupinda ku tarisa yakazara makodhi ewebhu mune yedu Forex Kutengesa Kamuri.
Taura nevatengesi vedu mune Nharaunda Discord Server.
Verenga kuputswa kwezuro: EURUSD & USDCHF Kuongorora neBullish Dollar
March 30, 2021 /by Forex Lens nhau
Tags: mari wokutengesera, kufanotaura, kuongororwa kwe forex, forex coronavirus, forex dzidzo, forex rarama kutengesa, forex purofiti, Forex anonongedzera, Forex kutengeserana ongororo, Forex Kutengesa Blog, forex yekutengesa imba, dzidza nzira yekutengesa forex, rarama forex yekutengesa, US Dollar
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2021/03/Forex-Lens-Youtube-Live-Forex-Trading-Room-EURUSD-and-USDCHF-in-Profit-plus-More-to-Come.jpg 720 1280 Forex Lens nhau https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Forex Lens nhau2021-03-30 17:37:132021-03-30 17:38:36EURUSD & USDCHF mune purofiti + Zvimwe Zvichauya
CADJPY Anoshuvira Akamirira + US Oiri Anoenderera Kusundira
Ndarama Tengesa Up +400 Pips seDhora reBulls Pile On
Coronavirus Ine Marike Muchiri Mubhuku + EURUSD Pfupi
USDCHF uye USDJPY Pfupi? + GBPUSD Inoshuvira Kuti Pamusoro PeMakona
Dhora Kudzorera Zvichida + USDJPY Swing Yakareba
GBPUSD, EURUSD uye USDCAD muPurofiti
Dhora Rakamira muRange, Goridhe Priming yeNotevera Push PazasiChikumi 24, 2021 - 4:16 pm
USDCAD Kutengesa muPurofiti + Bitcoin uye Cryptos Ratidza Chiratidzo cheHupenyuChikumi 23, 2021 - 4:45 pm
USDCAD Shorts Sezvo Dollar Inobereka Kuwedzera MomentumChikumi 22, 2021 - 4:48 pm
US Dollar Inotsvedza Pazasi + Cryptos Kutarisana Nekumanikidza Kubva kuMabheyaChikumi 21, 2021 - 5:20 pm
US Dollar kuenda ku93.400 + Goridhe uye AUDUSD Shorts yevhiki inoteveraChikumi 18, 2021 - 3:50 pm
EURUSD & USDCHF Kuongorora neBullish Dollar USDJPY Yakareba + DXY Yakagadzirira Inotevera Push Yakakwirira